Ahoana Ny Fomba Ahazoana Acrobat Pro DC Maimaim-Poana Ara-Dalàna - Free Acrobat Pro DC 2022 Version
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Acrobat Pro DC Maimaimpoana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-28, Malagasy Blog
Acrobat Pro DC maimaim-poana dia fampiharana mahazatra iraisam-pirenena hijerena, hanaovana sonia ary hanomezana hevitra momba ireo antontan-taratasy PDF. Adinoy ny antontan-taratasy misy antontan-taratasy miaraka amin'ny Acrobat Pro DC, kinova vaovao amin'ny programa tsara indrindra hiasa miaraka amin'ireo rakitra PDF.
Soa azo avy amin'ny Acrobat Pro DC Free
Mety amin'ny fampisehoana rehetra
Interface interface intuitive
Fampitahana mora ny rakitra roa
Fahazoana antontan-taratasy marani-tsaina
Ny mety hizarana antontan-taratasy
Famadihana rakitra amin'ny endrika hafa
Inona no ampidirina ao amin'ny kinova fitsapana Acrobat Pro DC?
Ny Adobe Acrobat Pro Free Trial dia manolotra ny kinova farany an'ny programa miaraka amin'ny fampiasa feno. Azonao atao ihany koa ny mahazo serivisy Document Cloud hiditra amin'ny fahafaha-manao premium amin'ny finday avo lenta.
Ampidino ny fitsapana maimaim-poana Acrobat Pro DC
Ho afaka hanao fanovana rakitra ho PDF ianao ary hanondrana azy ireo ho toy ny antontan-taratasy Microsoft Office namboarina avy amin'ny tranokala na telefaona. Ampiasao ny takelaka Android na iPad anao hanovana lahatsoratra sy sary, famenoana, fanaovan-tsonia ary fandefasana endrika miaraka amin'ny famenoana fiara-mandeha manokana.
Ankoatr'izay, azonao atao ny mahazo antontan-taratasy voasonia avy amin'ny mpampiasa hafa, mamaky ary mifehy ny hevitra. Ity programa ity dia ho toerana tsara ho an'ny fitehirizana sy fizarana rakitra an-tserasera.
Raha manapa-kevitra ny hividy ilay programa ny mpianatra aorian'ny fotoam-pitsarana, hahazo fihenam-bidy ve izy?
Eny, ny mpampianatra sy ny mpianatra dia afaka mahazo fihenam-bidy 60% amin'ny rindrambaiko Creative Cloud iray manontolo.
Inona marina no azoko aorian'ny fisoratana anarana amin'ny Acrobat DC?
Miaraka amin'ny famandrihana karama isam-bolana mba hanokafana loharanom-baovao Adobe Acrobat Pro DC na Acrobat Standard DC, azonao atao ny manararaotra ny iray amin'ireo fandaharana sy ny fanavaozana vaovao rehetra tsy misy fandoavam-bola fanampiny.
Ny serivisy Adobe Document Cloud dia manome anao fotoana hampiasa asa mandroso amin'ny fampiharana finday Acrobat Reader ary manamora ny asanao amin'ny antontan-taratasy PDF avy amin'ny finday avo lenta.
Manolotra fitaovana hanampiana ireo sampan-draharaha IT amin'ny fanaparitahana orinasa ve i Adobe?
Eny, fitaovana sy fitaovana acrobat DC be dia be no azo ampiasaina hanatsarana ny fametrahana ny orinasa sy hanampy amin'ny fitantanana ny vidin'ny IT. Raha mila fanazavana fanampiny, mankanesa any amin'ny loharanom-pahalalana pejy.
Azo atao ve ny mifandray amin'ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny fotoam-pitsarana maimaimpoana?
Raha manana olana amin'ny fitsapana maimaim-poana Acrobat ianao dia mandehana mankany amin'ny tranokala Adobe. Any ianao dia hahazo fanampiana avy amin'ny manam-pahaizana manokana ary hahita tutorial, fifanakalozan-kevitra ary torohevitra mahasoa. Mahazo tohana ara-teknika.
Azoko atao ve ny manohy mampiasa Adobe Acrobat Reader rehefa eo amin'ny fitsapana maimaimpoana Acrobat Pro aho?
Tamin'ny voalohany, Acrobat Pro DC dia voafidy ho mpijery PDF. Ovay ho Reader amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny Reader DC ary kitiho ny Edit & gt; Tombam-bidy & gt; Jeneraly. Avy eo dia safidio ny safidy "Select As Default PDF Handler" ary araho ny torolalana ao amin'ilay tranonkala.
Inona avy ireo takiana amin'ny rafitra farany ambany ahafahan'ny Acrobat DC milamina?
Jereo ny toetra teknikan'ilay rindrambaiko ao amin'ilay faritra manokana ao amin'ilay tranonkala. Zahao ny fampahalalana momba rafitra takiana.
Ny loza ateraky ny fampiasana ny kinova triatra an'ny Acrobat Pro DC maimaim-poana
Mpampiasa maro no tsy mahalala izay hitranga aorian'ny fisafidianany ny “Free Adobe Acrobat Pro download” amin'ny loharano sy riandrano samihafa.
Tsy ara-dalàna ny rindrambaiko piraty
Ny fametrahana Acrobat Reader Pro afaka amin'ny loharano na loharano tsy mendri-pitokisana, dia mety ho lasa olona iharan'ny heloka bevava amin'ny Internet. Miaraka amin'ny fanampian'ny programa toy izany dia mahazo fampahalalana momba ny kaonty amin'ny banky, karatra ary fidirana amin'ny poketra virtoaly izy ireo.
Hamaky bebe kokoa momba ny Adobe Acrobat Pro DC Torrents.
Ny lozisialy Pirated no loza mety hitranga
Ho fanampin'ny zava-misy fa voajirika Acrobat Pro DC maimaim-poana indraindray misy viriosy, ny fizotry ny fisintomana dia mety hiteraka fahasahiranana ihany koa. Tsy maintsy mandefa hafatra SMS ianao na mandoa vola amin'ny famoahana zip na fanonganana, handalo sora-baventy mipoitra maro.
Ankoatr'izay, asaina mametraka antivirus tsara aloha (satria mety manandrana mamindra virus ny rafitranao amin'ny alàlan'ny fampidinana ilay programa ny tranonkala toy izany.
Tsara kokoa ny mampiasa ny kinova Adobe Acrobat Standard na DC ara-dalàna ary matokia tanteraka ny fiarovana anao sy ny fiarovana ny angon-drakitra tokony hatrehinao. Ny mitsidika tranokala tsy voamarina dia mitovy amin'ny fanokafana rakitra mirakitra ny mailaka avy amin'ireo mpandefa tsy fantatra.
Ny programa manana fahazoan-dàlana dia tsy mitovy amin'ny programa voaloa
Ilaina ny mahatakatra zavatra tsotra: ny rindrambaiko manana fahazoan-dàlana dia tsy voatery aloa.
Misy fisoratana malalaka sy 100% fampiharana ara-dalàna marobe sahaza ho an'ny lahasa maro samihafa.
Matetika dia mora kokoa ny mahita fampiharana toy izany noho ny mitady amin'ny Internet ny fanalahidy ary misintona maimaimpoana ny Adobe Acrobat Pro, ary manambana ny solosainao.
Rindrambaiko Pirated dia mitarika amin'ny fanjifana tsy voafehy
Rehefa matetika ny olona mampiasa vokatra avo lenta azony maimaim-poana dia manomboka mieritreritra ny soatoavina izy ireo. Tsy manome lanja ny zavatra ananany ny olona satria tsy voafetra amin'ny zavatra rehetra izy ireo.
Mahazo misintona Adobe Acrobat Pro DC na programa hafa ara-dalàna, manomboka mankasitraka izay ampiasainy ny olona. Ny mahaliana dia ny habetsaky ny vidin'ny fividianana no mahatsara ny fihetsika amin'ny vokatra. Mazava ho azy, misy ny maningana mifandraika amin'ny ampihimamba an'ny mpanamboatra, fa tranga tsy dia fahita firy ireo.
Mila fanohanana ny vokatra tsara
Mividy vokatra mendrika dia mamporisika ny fanatsarana bebe kokoa ianao. Raha voajirika maimaimpoana ianao Acrobat Pro dia tsy afaka miresaka momba ny fanavaozana rehetra izahay. Manohana sy manatsara ny vokatrao ihany ny mpandrindra raha mbola misy vola ho azy. Mpampiasa maro no tsy mahatakatra izany, fa ny fizotran'ny famoronana sy famolavolana programa misy dia asa mafy, izay misy olona maro izay maniry karama koa.
3 safidy tsara maimaim-poana Acrobat
Raha tsy mieritreritra ny hampiasa fitsapana Adobe DC Pro ianao na mividy ilay rindrambaiko tanteraka, maninona raha manandramana fomba hafa azo atokisana sy azo atokisana?
Mampiasà PDFELEMENT TRIAL FREE
OCR (fanekena tarehintsoratra optika)
Tsy mila mandoa isam-bolana dia mividy ilay programa indray mandeha fotsiny ianao
Tsy azo atao ny manova ny lohahevitra / lokon'ny rindrambaiko
PDFelement dia safidy tsara indrindra amin'ny Adobe Acrobat Pro. Noho ny fanampian'ny fampandehanana misy dia azonao atao ny mampitaha, manova, maneho hevitra, manasonia, miaro ary mamadika ireo antontan-taratasy ho PDF. Ny rindrambaiko dia mety ho mpamaky mora ampiasaina sy fitaovana handraisana naoty ihany koa.
Hamaky bebe kokoa momba ny ny fomba fametrahana Adobe Flash Player Free.
Mampiasà PDFMATE PDF CONVERTER MAIMAIMPOANA
Afaka mamadika PDF ho endrika fisie maro
Fivadihan-drakitra notarafina ho lasa azo namboarina noho ny OCR tafiditra ao
Seho PDF vitsivitsy
Ity misy safidy hafa Acrobat Pro DC maimaim-poana miaraka amina andiana fiasa mahafa-po. Azonao atao ny manova endrika ireo rakitra PDF ho endrika Text, Word, JPG, EPUB, HTML ary SWF amin'ny Mac OS. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fampiasa OCR, azonao atao ny manova rakitra PDF notarafina. Ny fanamafisana ny rakitra sy ny fiovam-poana dia tohanana ihany koa.
Mampiasà PDFESCAPE MAIMAIMPOANA
Azo ampiasaina ho mpamaky PDF misy tsoratadidy
Fahaizana mamorona endrika
Ny kinova an-tserasera dia mametraka famerana ny haben'ny rakitra nakarina
Miasa tsy mety ny fiovana sasany
Misy kinova PDFescape roa. Ny voalohany dia rindrambaiko azo alain-tranonkala hijerena sy fanovana rakitra PDF. Ny faharoa dia kinova feno ho an'ireo mpampiasa birao. Omeko alohan'ity farany ny fanovana, famakiana sy fanovana PDF.
Ampidino Acrobat Pro Dы Maimaimpoana
Sintomy MAIMAIMPOANA ACROBAT PRO DС
Adobe (Acrobat) Reader no programa mahafinaritra sy malaza indrindra amin'ny famakiana sy fanontana antontan-taratasy ao * .pdf (Adobe Portable Document Format). Ny Adobe (Acrobat) Reader dia mamela anao hanao ny fandidiana ifotony rehetra rehefa miasa miaraka amina antontan-taratasy toy izany: mamaky, mandika, manakaiky ary mivoaka, manonta, manova ny fizoran'ny pejy sy maro hafa. Sintomy ny fitsapana maimaimpoana an'i Adobe amin'ity programa ity ary ankafizo ny hafainganam-pandeha sy ny fitantanana ny fisie PDF.
Zahao hoe misy fihenam-bidy Adobe Creative Cloud.
Tombony Adobe Acrobat Pro
Ampidino Acrobat Free